फोक्सोमा पानी जमेका १० वर्षीय पवन कार्की लाई सहयोग लिएर समाजसेवी योगमाया पुगिन्, थप सहयोगको लागि अपिल « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
पाँचथर जिल्ला फिदिम नगरपालिका वडा नं. १ साब्राङ निवासी धन बहादुर कार्की र दुर्गा माया वुडाथोकी का छोरा वर्ष १० का पवन कार्की विगत २०७६ फाल्गुण महिना देखि फोक्सोमा पानी जमी उपचारको क्रममा रहेका छन्। उपचारको क्रममा उहाहरुको पारिवारीक अवस्था एक दम नाजुक भएको कारणले गर्दा उहाहरुलाई एक दम गाह्रो भएको र यसै परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै फिदिम निवासी योगमाया भट्टराई ले फेसवुक मार्फत मिडियामा सार्वजनिक गर्नु भएको थियो।
उहाहरुको भिडियो सार्वजनिक गरेसंगै मानव सेवा समाज अस्ट्रेलिया का सस्थापक तथा अस्ट्रेलिया वसेर टिकटकको माध्यमवाट सामाजिक कार्य गर्दे आईरहनुभएका के.पी. सेढाइ ज्यूले उहाको ४ औ इपिसोड मार्फत रु ५०००।– फिदिम निवासी फोक्सोमा पानी जमेका पवन कार्कीलाई केहि सहयोग मिलोस भनि सहयोग गर्नुभएको छ । उक्त सहयोग रकम फिदिम निवासी समाजसेवी योग माया भट्टराई द्वारा हस्ताचरण गरिएको थियो। पवनको आमा ले सहयोग गर्नु भएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद दिदै थप सहयोग को लागि अपिल गर्नु भएको थियो ।
सप्तरीको राजविराजमा आइतबार साँझ ए’चआ’इभी एड्सबाट एक किशोरीको मृ’त्यु भएको छ । राजविराज नगरपालिका–१ चनौरा
६ बर्ष पहिले म,रेको मान्छेको चि,हान राति १२ बजे निकाल्नुको भित्रि रहस्य, गाउलेले ड,राउदै यस्तो सम्म भने (भिडियो सहित)